Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Oo Si Adag Uga Hadlay Arrinta Sarkaalkii Ka Goostay Somaliland, Madaxweynaha Ku Dhalliilay Xal Ka Gaadhis La’aanta Arrintaasi | Himilo Media Group
Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Oo Si Adag Uga Hadlay Arrinta Sarkaalkii Ka Goostay Somaliland, Madaxweynaha Ku Dhalliilay Xal Ka Gaadhis La’aanta Arrintaasi
“Qofku Dambi Wuu Galaa Oo Waxaan Maqlayey Qaar Leh Waa Dambiile Oo Waa Qaran Dumis, Laakiin Qofka Cafis Ayaa La Siiyaa Oo…”-Faysal Cali Waraabe
Burco, 29 August, 2019 (Himilo)-Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Ucid Mudane Faysal Cali Waraabe ayaa si adag uga hadlay Xaaladda Nabadgelyada iyo arrinta Sarkaal Caarre oo hore uga goostay Ciidanka Qaranka iyo waliba Ergada waanwaanta nabadeed ku jirta.
Guddoomiyaha Xisbiga Ucid waxa arrimahaasi kaga hadlay xafladii furitaanka Shirka Golaha Dhexe ee Xisbiga Ucid.
Ugu horreyna, Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay dhibaatada ay leedahay xal ka gaadhis la’aanta Sarkaalka ka soo goostay Ciidanka Qaranka ee ku sugan dalka gudihiisa waxaanu yidhi, “Waxa inagu taagan arrinta Sarkaal Caarre oo ah Gantaal badhida inagaga taalla, markaa ma dadkeena Caarre inta uu baxay ee uu soo noqday ee uu yidhi waar iga hooya Tiknikadii iyo Anigiiba ee ilaa maanta xallin kari waayey ka warrama”. Guddoomiyuhu waxa kale oo uu intaasi ku daray, “Qofku dambi wuu galaa oo waxaan maqlayey qaar leh waa Dambiile oo waa Qaran dumis, laakiin qofka cafis ayaa la siiyaa oo ALLE ayaa yidhi is cafiya, markaa maxay ku yeelaysaa oo maxay ina yeeshay hore ayeynu qaar u cafinaye oo immisa Jabhadood ayeynu cafinay”.
Sidoo kalena, Faysal waxa uu farta ku fiiqay Caarre iyo Ciidankiisa, “Nimankaasi maaha reer oo wax Garxajis la yidhaa kama tirsana oo waa Jabhad ka cadhootay Dawladoodii iyo Ciidammadoodii iyo Taliyahoodii oo halkaasi ayeynu ku heshiisiinaynaa oo aan leeyahay Madaxweyne tallaabadaadii ka qaad oo halkii loo mari jiray kuwii hore ba u mar oo innaga soo afjar oo haddii ALLE yidhaa way inaga dhammaan doontaa toddobaadkan soo socda”. Guddoomiye Faysal waxa kale oo uu tilmaamay ahmiyadda ay leedahay tallooyin ay Madaxda Xisbiyada Mucaaridka ah u gudbiyeen Madaxweynaha iyo waliba talada Eragadii ku dhex jirtay Xukuumadda iyo Sarkaal Caarre, “Dawladda waxaanu leenahay waa inay Salaadiintaasi talada ay keenaan ku hawl gashaa iyo waliba taladii u dambeysay oo toddobaadkan aanu siinay Madaxweynaha Aniga iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Waddani”.
Intaasi kadibna, Guddoomiyuhu waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida uu arko taladii uu hoggaamiye Xirsi uu siiyey Madaxweyne Muuse Biixi, “Xirsi taladiisii waxay aheyd talo…oo hore ayaan u sii sheegay oo aan idhi marka uu Qofku xilka ka maqan yahay ayuu talada yaqaanaa, ileyn dadka caqligu markaasi ayuu yimaadaa Wallaahi waan u khushuucay maalintii dhaweyd, Madaxweynahana waa markii ugu horreysay ee aan arkay wax loo sheegay inay galeen”.
Dhinaca kalena, Guddoomiyaha Xisbiga Ucid waxa uu raalli gelin ka bixiyey hadalkii Taliyaha guud ee Ciidanka Qaranka ee ku saabsanaa Ciidammadii Somaliland ka goostay, “Taliyihii Ciidammadeenu wuxuu maalintii dhaweyd ku hadlay masuulnimo may aheyn oo waxa uu yidhi Iska tega oo cashuurta mushaharka lagu bixiyo maaha jeebka ina Taani ee dadweynaha oo dhan ayaa bixiya, waxyaalaha caynkaasi ahina maaha waxay madaxdu ku hadasho oo waanu ka raalli gelinaynaa oo waanu ka raalli gelinayaa”.
Ugu dambeyntiina, Guddoomiyaha Xisbiga Ucid waxa uu ku dhawaaqay casuumad uu u fidinayo Barriga Sanaag, “Axada, waxaanu casuumad u sameynaynaa dadkii ka soo jeeday Barriga Sanaag”. Ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe